१० करोड लगानीमा शीपमूलक तालीम सञ्चालन गरिँदै
२०७७ मंसिर, ८
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै शीप तथा रोजगारमूलक तालीम दिने भएको छ । मन्त्रालयले केन्द्रमार्फत रू. १० करोड लगानी गरी १० हजार जनशक्तिलाई शीप विकास तालीम दिन लागेको हो । त्यसका लागि मन्त्रीस्तरबाट मङ्सिर ५ गते लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन तालीम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ समेत स्वीकृत गरिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार यो तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वरोजगारी वा रोजगारीका लागि शीप विकास तालीम प्रदान गरिनेछ । तालीम कार्यक्रमका विषय छनोट गर्दा स्थानीयस्तरमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउने, स्थानीय कच्चापदार्थ र परम्परागत शीप प्रविधिको व्यावसायिक उपयोग हुने, स्थानीय उत्पादनहरूको प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धिसम्बन्धी विषयहरू छनोट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नेपाली श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने शीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत वैशाखमा यो केन्द्र स्थापना गरेको हो । श्रम बजारको माग अनुसार तालीम दिने र आवश्यक स्थानमा ती शीप सिकेका जनशक्ति उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम शुरू गरिएको उपसचिव दिनेशसागर भुसालले जानकारी दिए । यो तालीम केन्द्रले आप्mनै भवन तथा स्रोतसाधनको प्रयोग गरी उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।
यो तालीम स्थानीय तहले माग गरेमा पनि उपलब्ध गराइने र अन्य निकायसँग समेत समन्वय गरिने मन्त्रालयको तयारी छ । त्यसो त मन्त्रालयले मुलुकभरका ६३ हजार ३९० जना नयाँ लघु उद्यमी बनाउने महŒवाकांक्षी लक्ष्यका लागि रू. १ अर्ब ५४ करोड ४७ लाख लगानी गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रम ‘गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)’ मार्फत सञ्चालित यस कार्यक्रमबाट नयाँ लघु उद्यमी सृजना गर्ने लक्ष्य लिइएको हो । यो केन्द्रमार्फत भने उद्यमीभन्दा पनि बजारको माग र रोजगार पाउने सम्भावित क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै युवा जनशक्तिलाई तालीम दिई काम गर्न सक्षम बनाइने मन्त्रालयको दाबी छ ।
विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक सुधारको निरन्तरतामा नकारात्मक प्रभाव पार्दैन : अर्थमन्त्री पौडेल[२०७७ माघ, ८]
दोस्रो त्रैमासमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको नाफा १ अर्ब ५८ करोडभन्दा बढी[२०७७ माघ, ८]
सामलिङ पावर कम्पनीले ५० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा दियो निवेदन[२०७७ माघ, ८]
नेप्से परिसूचक २४०० विन्दु नजिक, कारोबार रकम करीब ८ अर्ब[२०७७ माघ, ८]
ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डबाट पायो अनुमति [२०७७ माघ, ८]
प्रतिबन्ध नखुल्दा लाखौं घनफिट सालको काठ जंगलमै अलपत्र [२०७७ माघ, ८]
चालू आवको ६ महीनामा साढे ६ खर्बको विदेशी वस्तु आयात [२०७७ माघ, ८]
५८ प्रकारका उद्योगलाई विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा छूट दिने निर्णय कार्यान्वयनमा : विद्युत् प्राधिकरण[२०७७ माघ, ८]
भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्‍यो १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप[२०७७ माघ, ८]